IChampagne yeCottage Abbey yembali - I-Airbnb
IChampagne yeCottage Abbey yembali
Indibano yezidiliya zeChampagne, iikhilomitha ezili-15 ukusuka eSezanne, iikhilomitha ezingama-30 kumazantsi e-Epernay, iikhilomitha ezingama-120 ukusuka eParis, kwiNtlambo ephakamileyo yePetit Morin, indawo eyayisakuba yiCistercian Abbey echazwe kwimbali yesikhumbuzo ikulindile. I-Cottage kumgangatho wokuqala wesakhiwo seemonki ze-12-13. Iseti i-atypical: i-corridor enkulu kunye neeseli ze-monastic zangaphambili. Ukufikelela ngokuthe ngqo kwi-terrace. Ukwakha okuzimeleyo. Isitiya esivaliweyo.
Iseti i-atypical kunye nepaseji enkulu kunye neeseli ze-monastic zangaphambili. Ukufikelela ngokuthe ngqo kwi-terrace. Isakhiwo sizimele kunye neGadi evaliweyo.
Ukungena, ipaseji ebanzi, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi lokuhlambela elibanzi, iishawari ezi-2 kwisitayile sase-Italiya kunye nezitya ezi-2, 2 wc ezizimeleyo.
5 amagumbi okulala:
- igumbi eli-1 (ibhedi: 1 x 140)
- 4 amagumbi okulala (iibhedi: 2 x 90)
4.90 · Izimvo eziyi-141
Ukolula amanzi (kwindawo)
Ukuhamba ngeenyawo (ekuyo indawo)
Ukukhwela ihashe (20.km)
Iqula lokuqubha (15.km)
Isikhululo sikaloliwe (30.km)
Passionné de bâtiments anciens, l'abbaye, acquise en 2002, a déjà bénéficié de quinze années de restauration. Le gîtes de l'hôtellerie a été inauguré en 2005 et le gîte des Moines en 2012. La restauration va se poursuivre dans les années à venir! Je suis le maire de la commune de Talus Saint Prix depuis 2008. Le vignoble d'appellation "Champagne" est la principale activité de la commune avec une dizaine de producteurs locaux.
UDidier Poupinel uya kukwamkela ekufikeni kwakho kwaye uya kufumaneka ukuba ufuna naliphi na icebiso kunye / okanye uncedo. Kwakhona uya kukunika utyelelo olunikeziweyo lwe-Abbey ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngembali yesi sakhiwo selifa lemveli.
UDidier Poupinel uya kukwamkela ekufikeni kwakho kwaye uya kufumaneka ukuba ufuna naliphi na icebiso kunye / okanye uncedo. Kwakhona uya kukunika utyelelo olunikeziweyo lwe-Abbey u…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Talus-Saint-Prix